Microdrone Smartview VR ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Tiny | ပထမလူလေယာဉ်ခရီးစဉ် | Gadget သတင်း
ချဉ်းကပ်လာသည့်ခရစ်စမတ်၏အားသာချက်ကိုယူပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်သွားကြမည် အမျိုးမျိုးသောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတင်သွင်းပါ အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်၌နှစ်မျိုးလုံးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များသည်ယခုနှစ်တွင်ကြယ်ပွင့်လက်ဆောင်များဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီနေ့စလုပ်ဖို့ကတော့ Microdrone Smartview VR ဖြစ်ပြီးလက်ဖဝါးထဲမှာအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့အလွန်သေးငယ်သောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နဲ့အတူလုပ်ဖို့သွားတော့မယ်။ သူရဲ့ထူးခြားတဲ့အင်္ဂါရပ်ကမျက်မှန်နဲ့အတူ Real-time ဗီဒီယိုစနစ်ပါဝင်တဲ့အတွက် VR မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မျက်မှန် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အရွယ်အစားရှိစက်ပစ္စည်းများ၌အသစ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သောလူတစ် ဦး FPV ၏ပျံသန်းမှုအတွေ့အကြုံကိုခံစားခွင့်ရစေသည်။
2 ပျော်ရွှင်စရာနှင့်လွယ်ကူသော piloting
3.1 iOS အတွက် app ကို download လုပ်ပါ
3.2 Android အက်ပ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
5 Microdrone Smartview VR ၏အခြားအင်္ဂါရပ်များ
8 Microdrone Smartview VR နိဂုံးချုပ်
9 Smartview VR microdrone ကိုဝယ်ပါ
ပထမဆုံး microdone အကြောင်းအလေးပေးဖော်ပြရမည့်အချက်မှာ၎င်း၏အရွယ်အစားအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ နှင့်အတူ ကျယ်ပြန့်သာ3စင်တီမီတာ ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ့်သေးငယ်တဲ့ microdrone နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပေမယ့်အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးနိုင်တဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ minicamera တပ်ဆင်ထားပါတယ် အချိန်နှင့်တပြေးညီဗီဒီယိုကြည့်ပါ.
ကင်မရာအပြင်ထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်နှစ်မျိုးကိုထုတ်ဖော်ပြသသည်မှာ၎င်းတို့သည်သာမန်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအတွက်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့် အိမ်ပြန်ခလုတ်ကို နှင့် အကြွင်းမဲ့အာဏာထိန်းချုပ်မှု။ အိမ်တွင်းပျံသန်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော microdrone တွင်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အလွန်ရှားပါးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် home an return ပြန်လာသည့် home ခလုတ်အားဖြင့်လေယာဉ်ကွင်းတွင်ရှေ့ပြေးလေ့ကျင့်သူများအတွက်အကြွင်းမဲ့ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းသည်အရေးကြီးသည်။
ဒါဟာအစပါဝင်သည် ပါဝါခလုတ်ကို ပန်ကာများအတွက် spinning နှင့်အခြားစတင်ရန် ဆင်းသက်သည်, ငါတို့ကတကယ်ကိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်ကြောင်းအလေးပေးရန်ရှိသည်။
El Microdrone Smartview VR ၎င်းသည်ဘူတာရုံကိုဖြတ်သန်းရန်အလွန်ရိုးရှင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုအထူးသဖြင့်ပြုလုပ်သည် ယခင်အတွေ့အကြုံမရှိသောသူများအတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်သင့်တော်သည် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ၏ piloting နှင့်အတူ။ ၎င်းသည်ပန်ကာများအတွက်ဖြုတ်တပ်နိုင်သောကာကွယ်မှုတပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်ပထမဆုံးပျံသန်းမှုအစီအစဉ်များအတွက်အလွန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးသောအခါ၎င်းကိုသင်ဖယ်ရှားရန်နှင့်လေယာဉ်ပျံသည်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးပျော်စရာမလိုပါ။
ကမ်းလှမ်းမှု လေယာဉ်နှစ်စင်းအခြားသူများနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သောတတိယမြောက်မြန်နှုန်းကိုစမ်းသပ်ပြီးအခြားအရွယ်အစားတူစက်ပစ္စည်းများ၌ရရှိနိုင်သောတတိယအမြန်နှုန်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်၊ အလွန်လျှပ်စစ်နှင့်ပျော်စရာလေယာဉ်ခရီးစဉ်။
များသောအားဖြင့်သာမန်အားဖြင့်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည် ပုံမှန်ကွင်းနှင့်လှည့်ဖျားလုပ်ဖို့ stunt mode ကို လေထဲမှာ။
Smartview VR သည်သင်ရှိမရှိပျံသန်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည် သင်ဘူတာရုံနှင့်အတူမောင်း သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာအဖြစ် box ထဲမှာလာပါတယ် သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းကနေထိန်းချုပ်မှု။ သင်၏စမတ်ဖုန်းဖြင့်စမ်းသပ်ရန်သင် iOS နှင့် Android အတွက်အောက်ပါအက်ပလီကေးရှင်းကိုတပ်ဆင်ရုံသာဖြစ်သည်။ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုဖွင့်ပါ။ သင့်စမတ်ဖုန်း၏ဝိုင်ဖိုင်ကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ အက်ပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ပါ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်တို့သည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လွှင့်စက်နှင့်အတူပျံသန်းလိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိန်းချုပ်မှုများကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်ထိတွေ့ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်သောခံစားမှုသည်မိုဘိုင်းဖန်သားပြင်နှင့်လုပ်ခြင်းနှင့်မတူပါ၊ သို့သော်ဤပျံသန်းမှုပုံစံကိုကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်ဤမိုက်ခရိုဒွန်းက၎င်းကိုခွင့်ပြုသည် ။
iOS အတွက် app ကို download လုပ်ပါ
microdrone ၏ပေါင်းစည်းမှုသည် VR Drone Glasses နှင့်အတူတကွပေါင်းစည်းခြင်းကြောင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှိုင်းယှဉ်လျှင်ကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံများကိုရရှိစေသည်။ သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နှင့်သာချိတ်ဆက်ပြီးဖန်သားပြင်ကိုနှစ်ခြမ်းခွဲနိုင်ပြီးစမတ်ဖုန်းကိုမျက်မှန်အကွက်ထဲသို့ထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အိုင်ကွန်တစ်ခုကိုနှိပ်ပါ။ သင့်ရဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကိုပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်မောင်းနှင်ပါ.
အချိန်နှင့်တပြေးညီဗီဒီယိုသည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဗီဒီယိုတွင်နှောင့်နှေးမှုအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမျက်မှန်နှင့်အတူကုန်ကျသည်ဆိုပါကလက်ခံနိုင်သည်။ € 90 ထက်နည်း ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား FPV piloting တွင်စတင်စမ်းသပ်ရန်ကူညီသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, နေရာများလျှော့ချဘယ်မှာအိမ်တွင်းပျံသန်းဖို့ဒီဇိုင်းပစ္စည်းဖြစ်ခြင်း, FPV ပျံသန်းမှုအတွက်သာအကြံပြုသည် အလယ်အလတ်ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုများ။ သင်ပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်မှုကိုဤလေယာဉ်ခရီးစဉ် mode တွင်ပြုလုပ်ရန်လိုပါကအားကစားခန်းမကဲ့သို့သောအတွင်းပိုင်းနေရာများတွင်အသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အကယ်၍ ၎င်းသည်ပထမစက္ကန့်ပိုင်းလောက်ကတည်းကပျက်ပြားခြင်းမဟုတ်ပါ။ အတွေ့အကြုံရှုပ်ထွေးလျှင်တစ်စုံတစ် ဦး ကကောင်းစွာအကွာအဝေးအကွာအဝေးနှင့်စက်ပစ္စည်းများ၏အခြေအနေပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်။ အဘယ်အရာကိုသိသည်။
Microdrone Smartview VR ၏အခြားအင်္ဂါရပ်များ
အဆိုပါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ် ဦး ရှိပါတယ် ၆ မိနစ်လေယာဉ်မောင်းခွင့်; USB အားတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ဘက်ထရီကိုအားသွင်းနိုင်သည်။ ထို့နောက်၎င်းကိုပါဝါသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာသို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ဘူတာရုံမှတဆင့်က load နိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယ option သည်အားသွင်းမှုနှေးကွေးစေသည်။ ဘူတာ၏ဘက်ထရီများကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ ယုတ္တိနည်းအရ၎င်းကိုလမ်းပေါ်ရောက်နေချိန်တွင်သာအားသွင်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ကားမောင်းနေစဉ် (အချိန်တွင်မျက်မှန်ကိုမသုံးလိုလျှင်) ဗွီဒီယိုကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီကြည့်ရှုရန်စမတ်ဖုန်းကိုနေရာချနိုင်သည့်ဤသင်ခန်းစာတွင်ဘူတာတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းတွင် microdone ကိုပိုမိုသက်သောင့်သက်သာဖြင့်သယ်ဆောင်နိုင်သည့်သေးငယ်သည့်အရံတစ်ခုလည်းရှိသည်။
VR မျက်မှန်နှင့်အတူလူတစ် ဦး လေယာဉ်ခရီးစဉ် mode ကို
Landing ခလုတ်၊ အကြွင်းမဲ့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အိမ်သို့ပြန်ခြင်းစသည့်အဆင့်မြင့်သောလုပ်ဆောင်ချက်များ
Microdrone Smartview VR နိဂုံးချုပ်
Smartview VR microdrone ကိုဝယ်ပါ
Smartview VR microdrone သည်ယူရို ၈၉.၉၀၊ Juguetrónicaတွင်ဤနေရာကို နှိပ်၍ ၀ ယ်နိုင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » Microdrone Smartview VR ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
Sony Xperia X နှင့် X Compact အတွက် Android 7.0 Nougat
Kickass Torrents သည်ဒိုမိန်းအသစ်တစ်ခုမှပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာသည်